शिक्षालाई समय अनुरुप परिवर्तन गर्नु पर्छः गीता राणा (भिडियो सम्वाद) | KTM Khabar
२०७४ बैशाख १ गते २२:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । यति बेला शैक्षिक संस्थाहरुको गतिविधिलाई लिएर धेरै नै बहस हुन थालेको छ । कहिले सरकारले ल्याएको नीतिका विषयमा हुन्छ भने कहिले सञ्चालित विद्यालयहरुको व्यबस्थापनका निम्ति हुन्छ । यी विषयलाई केन्द्रित गरेर केटिएम खबरले समग्र शैक्षिक गतिविधिलाई समेट्न विभिन्न बहसका कार्यक्रमहरु गर्दै आईरहेको छ ।
यसै गरी समग्र शैक्षिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नका लागि ग्यालेक्सि पब्लिक स्कुल कि फाउण्डर/प्रिन्सिपल एवं नेशनल प्याब्सन कि सँस्थापक अध्यक्ष गीता राणासंग केटिएम खबरका लागि श्याम कार्कीले विशेष भिडियो सम्वाद गरेका छन । प्रस्तुत छ उनै राणासंग गरिएको विशेष सम्वादको सम्पादित अंशः
यत्ति बेला मेमको व्यस्तता, दौडधुप कत्ता तिर छ ?
म राजनीतिमा प्रवेश गरी सके पछी अहिले स्थानिय निर्वाचन आउँदै छ । त्यता तिर पनि यत्ति कै व्यस्त छु । योसंगै विद्यालयको आफै फाउण्डर, आफैले स्थापना गरेको हुनाले विद्यालयको आवश्यक योजना बनाउँने तिर पनि व्यस्त छु ।
राजनीतिमा केन्द्रित भईसके पछी अर्को पेशा, व्याबसायी तिर पनि केन्द्रित हुनु पर्छ । दुवै तिर केन्द्रित छु ।
स्कुल पनि राम्रोसंग चलाई रहनु भएको छ, संसदीय गतिविधिमा पनि यहाँको सहभागिता त्यति कै छ । दुवै तिरको समय व्यबस्थान कसरी गरिरहनु भएको छ ?
जुन बेला संबिधान लेखन भन्यो । पहिलो संविधानमा त हामी प्रवेश गरेनौँ । पहिलो संविधानमा धेरै मुद्धाहरु उठाए तर त्यसले समाधानहरु दिन सकेनन् । त्यस पछीको दोश्रो संविधानमा चाहि त्यी समाधानहरु मैले पनि दिन सक्छु भन्ने मलाई लाग्यो । संविधान सभा दोश्रोमा प्रवेश गरे । त्यसको मुख्य उद्देश्य चाही राजनीति थिएन । त्यहा चाही संविधान लेखन भनेर गएका थियौँ र संविधान पनि निर्माण भयो । त्यस पछी मलाई संविधान बनि सके पछी हाम्रो त्यहाको यात्रा चाही समाप्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर दोश्रो संविधान चाही व्यबस्थापिकामा रुपान्तरित भयो । व्यबस्थापिका भने पछी त्यो राजनीति नै हो । अब सुरु भयो राजनीति यात्रा । त्यहा तिन बर्ष बस्दा त्यसले राजनीतिमा पनि आफुले केही गर्न सक्छु । गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने चाही लाग्यो । त्यस कारण त्यो यात्रा तिर पनि निस्किएको छु ।
यत्ति बेलामो शिक्षाको अवस्थालाई नियाल्दा कस्तो पाउँनु हुन्छ ?
एउटा शिक्षा नीति भईसकेको छ । शिक्षा नीतिले के भनिरहेको छ भने अब विद्यालयहरुको जति परिक्षाहरु छ । त्यो ग्रेडिङ सिष्टममा गइसकेको छ । ग्रेडिङ सिष्टममा जानु भनेको हरेक विद्यार्थीको व्यक्तिगत प्रतिभालाई प्रष्फुठन गराउँनु हो । त्यो झन कठिन छ ।
पहिला त कक्षा कोठामा गयो, त्यहा एउटा टिचरले चक र डस्टर, एउटा पुस्तकले पढाए पुग्थ्यो तर अहिलेको शिक्षा नीतिले त ग्रेडिङमा जानु भनेको त एउटा–एउटा व्यक्तिमा के छ त क्षमता ? र त्यसमा व्यक्ति पिच्छे नी फरक हुन्छ । त्यस कारण अबको दिनहरुमा चाही शिक्षालाई व्यबस्थापन गर्नु कठिन चाही हुन्छ ।
गत वर्षबाट सुरु भएको ग्रेडिङ रिजल्टको विषयमा धेरै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुका लागि दुविधाहरुको विषय बन्यो । अहिले जो एस.ई.इ. दिनुभएका विद्यार्थीहरुमा त्यस्तो अवस्था छ कि छैन ?
विद्यालयहरुले त बुझेका नै छन । विद्यार्थीहरुले नी बुझेका छन् तर त्यसको व्यबस्थापन गर्ने पक्षको तयारी चाही पुगेको छैन । सरकारले यसमा ठुलो लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । जनशक्तिको आवश्यकता छ, भौतिक पुर्वाधार छ । यी सबैको तयारी पुरा रुपमा पुगेको छैन । त्यो तयारी नभइकन हामी ग्रडिङमा प्रवेश गरी सकेका छौँ तर पनि मलाई लाग्छ केही समय पछि यसको राम्रो व्यबस्थापन होला ।
विकसित मुलुकहरुको तुलनामा हाम्रो नेपालको शिक्षा कता छ ?, के महशुस गर्नुहुन्छ ?
शिक्षा भनेको समय अनुरुप परिवर्तन हुनु पर्छ । कुनै बेला शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्तिको माध्यम थियो । त्यस पछी रोजगारी पाउँनु पर्छ भनेर शिक्षालाई माध्यम बनाइयो । त्यस पछी सिप मुलक शिक्षामा अग्रसर देखियो तर अहिलेको शिक्षा भनेको जीबन उपयोगी शिक्षा हो । जीबन उपयोगी शिक्षा भनेको यदि विद्यार्थीले जागिर नपाए पनि उसले अर्कै काम गर्न सक्छ । उसमा सिप नभए पनि उसले अन्य काम पनि गर्न सक्छ । उ राजनीति पनि गर्न सक्छ, आफ्नो व्याबसाय पनि गर्न सक्छ । यसले उसको क्षेत्र फराकिलो भएको छ । यसरी शिक्षालाई बुझ्नु पर्छ ।
गीता राणासंगको थप कुराकानी तथा भिडियो सम्वाद हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः